Mikaroka ny tsara indrindra ao Darwin
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Mikaroka ny tsara indrindra ao Darwin
Septambra 5, 2014
Zaridaina Botanika Darwin
Toerana iainana i Darwin amin'ny toetr'andro milamina, sakafo ara-kolontsaina ary kolontsaina indizeny amin'ny fety any ivelany, trano fisakafoanana amoron-drano, valan-javaboary tropikaly ary faritry ny zavakanto.
Toerana iainana i Darwin amin'ny toetr'andro milamina, sakafo ara-kolontsaina ary kolontsaina indizeny amin'ny fety any ivelany, trano fisakafoanana amoron-drano, valan-javaboary tropikaly ary faritry ny zavakanto. Eto amin'ny renivohitra Avaratry Aostralia, ny mpitsidika dia hahita traikefa nahafinaritra amin'ity faritra mampientanentana sy mampiavaka an'izao tontolo izao ity. Tsy ny Teritori ihany no mirehareha amin'ny sasany amin'ireo fiainana dia tsy mampino indrindra eto an-tany, fa ireo faritra “efa zatra” ao an-tanàna ihany koa dia manolotra trano fisakafoanana sy fisotroana mahafinaritra ary trano hipetrahana.
Feno tantara mampientam-po ity faritra ity - nanomboka tamin'ny fanafihana an'habakabaka tamin'ny Ady lehibe II ka hatrany amin'ny Cyclone Tracey - miandry ny ho hita ao amin'ny tranombakoka sy galeria avokoa izy rehetra. Ao amin'ny Darwin Harbour dia mety misy fitsangantsanganana an-tsambo miaraka amin'ireo voay sasany, ary ny lalana mikarantsana mamakivaky ala tropikaly dia tsy misy toa izany. Ity renivohitra tropikaly velona ity dia manana angovo tanora izay sarotra toherina.
Tsy te halahelo ireo mpitsidika:
• Mahafantatra ny tantaran'i Darwin feno loko
• Mandehandeha mamaky ny zaridaina botanika
• Mahita ireo marika malaza sy toerana malaza
• Famotopotorana ny tranombakoka sy magazak'ilay zavakanto amin'ny faritra avaratra
Inona no fomba tsara kokoa hiainana an'i Darwin ankoatry ny fanandramana momba ny fialan-tsasatry ny tanàna amin'ny fialan-tsasatra volamena, manolotra fonosana feno miaraka amin'ny fitsidihana an-tsokosoko an'i Darwin mandritra ny antsasaky ny andro hahafahan'ny mpandeha “manoboka ny rantsan-tongony” ao Darwin ary hahafantatra izany, alohan'ny “hiroboka ny faran'ny lalina ”niainana traikefa nahafinaritra!
Raha mila fanazavana fanampiny, zahao ny http://holiday.malaysiaairlines.com, mailaka: [email voaaro] na antsoy ny +603 22722160/2272 2163